8 Tombontsoa azo avy amin'ny Soy Lecithin Powder - Shangke simika
8 Tombontsoa Soy Lecithin Powder
Ny lazan'ny soja lecithin soy dia niparitaka nanerana izao tontolo izao toy ny roimemy ala, tsy mahagaga raha mitombo ny varotra soja lecithin be. Lecithin dia teny ankapobeny mifandraika amin'ny famokarana matavy isan-karazany izay hita amin'ny zavamaniry ary koa taolana biby. Ankoatra ny fanatsarana ny fihinan'ny sakafo, ny lecithin dia fantatra ihany koa amin'ny fahafahany mampitombo ny fiainana amin'ny talantalana amin'ny vokatra sakafo isan-karazany toy ny menaka fandrahoan-tsakafo sy ny salady amin'ny salady.
Tamin'ny voalohany, ny lecithin dia nalaina tamin'ny atody York, saingy tamin'ny fotoana, ny loharanom-pahalalana lehibe hafa ao anatin'izany ny landy, ny hazan-dranomasina, ny soja, ny voanjo, ny voanjo mainty, ny ronono, ny felam-boasary ary ny katsaka. Anisan'ireo loharanom-boankazo lecithin manankarena indrindra ny soyans, ary mitondra antsika amin'ny soy lecithin izany.
Inona no atao hoe Soy Lecithin?
Soy lecithin dia endrika lecithin izay nalaina avy amin'ny soza asidra mampiasa solika simika toy ny hexane. Avy eo, ny fitrandrahana solika dia zahana hanesorana lecithin avy amin'ny vokatra hafa ary aorian'izay dia vita ny fanamainana lecithin. Isan'ireo karazan-tsakafo mahazatra mahazatra amin'izao fotoana izao eny an-tsena.
Soba lecithin vovoka dia ampiasaina amin'ny fivarotana mahazatra sy amin'ny fivarotana sakafo ara-pahasalamana ho toy ny fitaovana sakafo hanamafisana ny fahasalaman'ny mpanjifa. Ny famatsiana vita amin'ny vovony soja lecithin dia manolotra tombony betsaka ho an'ny fahasalamana anisan'izany ny fihenan'ny kolesterola. Izany dia noho ny atiny phosphatidylcholine avo sy ny votoatin'ny phosphatidylserine. Ireo phospholipid roa ireo dia tafiditra ao anaty fitsaboana amin'ny fanoloana ranon-tongotry ny vatan'olombelona, ​​miaraka amin'ireo fiasa hafa.
8 Tombontsoa Soy Lecithin mahasoa
Araka ny efa voalaza teo aloha, ny soy lecithin dia manana tombony betsaka, ny lehibe indrindra dia:
1.Ny fihenan'ny kolesterola
Ny kolesterola be dia be ao amin'ny vatan'olombelona iray dia manintona risika ara-pahasalamana marobe, ny tena ratsy indrindra dia mihamitombo ny aretin'ny fo. Soa ihany, ny mpikaroka momba ny sakafo maha-lecithin soja dia nahafantatra fa ny vovony soja lecithin na soja lecithin capsy dia afaka manampy ny atiny amin'ny famokarana be dia be avo-fofona lipoprotein (HDL), izay antsoina koa hoe kolesterola "tsara".
Rehefa mitombo ny haavon'ny HDL, mihena ny haavon'ny kolesterola ratsy (lipoprotein ambany). Misy fomba hafa ahafahan'ny olona mampihena ny haavon'ny kolesterola ao amin'ny vatany, fa ny sôkôlà soja lecithin, soja lecithin soja na sakafo asiana vovony soja lecithin dia iray amin'ireo fanafody voajanahary mahomby indrindra.
Nisy ny fandinihana natao mba hanombanana ny fiantraikan'ny soja lecithin soya amin'ny olona mijaly amin'ny hypercholesterolemia (ambaratonga avo lenta amin'ny ra) .Narihin'ireo mpikaroka fa ny fisakafoanana soja lecithin isan'andro (manodidina ny 17 miligram isan'andro) dia nitarika ny fihenan'ny kolesterola 41 tamin'ny hypercholesterolemia afaka iray volana.
Amin'izay fotoana izay dia mihena 42% ny haavon'ny kolesterola LDL ary 56 isan-jato taorian'ny roa volana. Izany dia manolo-kevitra fa ny fandraisana tsiro lecithin mahazatra soy dia mety ho fanafody mahomby ho an'ny hypercholesterolemia.
2.Soy lecithin sy fisorohana ny homamiadana
Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny taona Epidemiology Journal tamin'ny 2011 izay mifantoka amin'ny soja lecithin sy ny hery fisorohana ny homamiadan'ny nono, ny fampiasana suplement lecithin dia mety hihena ny risika amin'ny homamiadana. Ny mpikaroka dia nanamarika ny fihenan'ny tsy fahampian'ny kansera amin'ny vehivavy postmenopausal izay nandany ny soja lecithin soja nandritra ny fotoam-pitsarana.
Ekena fa ny mety ho fampihenana ity homamiadana ity dia satria ny soja lecithin dia misy phosphatidylcholine. Rehefa mihena ny fihanahana dia miova ny cholatidylcholine amin'ny choline izay misy anjara toerana lehibe amin'ny fampihenana ny risika homamiadana.
Na izany aza, ny fikarohana momba ny homamiadan'ny ron-kena sy ny tratry ny homamiadana dia ilaina mba hahalalana raha tena marina, ny soja lecithin dia mety ho fitsaboana mahomby amin'ny homamiadan'ny nono.
3.Mampanahy colitis relief
Ulitisative colitis, aretim-bavony mampahavitrika iray mampiavaka ny aretin-kozatra manempotra làlam-pandrefesana mamaivay, manaintaina be ho an'ireo iharany. Soa ihany, ireo izay nandray ny sakafo ara-tsakafo lecithin soja dia nahatsapa fanamaivanana lehibe ireo soritr'aretina.
Rehefa tonga any anaty kôpika ny soja lecithin soy, dia mamono azy io, mamorona sakana eo amin'ny ravin-tsina ary manatsara ny haretiny. Ny sakana dia miaro ny kankana amin'ny otrikaretina bakteria ary mandray anjara amin'ny dingana fandevonan-kanina tsara kokoa.
Ny tsara kokoa, ny fikarohana dia mampiseho fa ny votoatin'ny phosphatidylcholine amin'ny soja lecithin soja dia mety hampihena ny fihanaky ny colitis ulcerative. Izany dia ankoatry ny famerenana amin'ny laoniny ny sakana moka ravan'ny aretina.
4.Misy fihenan-tsaina ara-batana sy ara-tsaina
Ny soja lecithin dia misy phosphatidylserine, phospholipid manan-danja izay fantatra fa misy fiantraikany amin'ny famenon'ny adin-tsaina. Indrindra, ny mpikaroka dia manombatombana fa ny sôkôlà phosphatidylserine dia miasa miaraka amin'ny asidra phosphatidic (misy ao amin'ny soy lecithin ihany koa) mba hanolotra fihenan-tsofina mahamando ho an'ny vatan'olombelona. Vokatr'izany dia nandinika ny fanadihadiana iray fa ny soja lecithin dia mety ho fitsaboana voajanahary amin'ny toe-pahasalamana mifandray amin'ny fahasalaman-doha.
Manampy izany, ny valim-pikarohana natao tamin'ny taona 2011 ary nasongadin'ny American Journal of Clinical Nutrition dia manome soso-kevitra ny olona manana avo ny fandraisana ny choline (ao anatin'izany ny mpanjifa lecithin soya mahazatra) dia niaina haavo ara-batana sy ara-tsaina ambany. Noho izany, manana fahatsiarovana tsara kokoa izy ireo ary mihena ny fiantraikan'ny dementia.
Rehefa alaina araka ny fahazoan-dalana azy dia afaka manatsara ny fanadiovana ny hoditrao ny kapoakan'ny soja lecithin. Izy dia fanafody voajanahary mahomby ho an'ny eczema sy ny mony, noho ny fananany hidradradradra. Tsy mahagaga raha lecithin soy lecithin dia zava-dehibe amin'ny vokatra skincare.
6.Mampitombo ny hery fiarovana
Ny fandinihana natao tamin'ny biby natao hanombatombana ny fiantraikan'ny lecithin soja dia nampiseho fa afaka mampitombo ny fiasan-kanina izy io. Ny soja isan'andro lecithin supplement ampio ireo sela fotsy rà amin'ny ady ataon'izy ireo amin'ny lalan-drà.
7.Dementia soritr'aretin'ny fanamaivanana
Noho ny votoaty avo dia avo, ny soy lecithin dia mitondra fifandraisana tsara kokoa eo amin'ny atidohan'olombelona sy ireo taova vatana. Ny anton'izany dia satria ny choline dia singa lehibe amin'ny serasera. Noho izany, ny olona voan'ny dementia dia afaka mandray soa be dia be amin'ny soja lecithin raha mampiditra azy ireo ao anatin'ny drafi-pisakafoanana isan'andro.
8.Menopause soritr'aretin'ny fanamaivanana
Ny fandinihana marobe dia manondro fa ny fampidirana soja lecithin soy dia afaka manome fanamaivanana menopause manan-danja lehibe. Indrindra indrindra, dia hita fa manamafy ny tanjaka, manatsara ny fihenan'ny aretim-po ary mitondra ny haavon'ny tosidra amin'ny normal eo amin'ny vehivavy menopausal.
Tao anatin'ny fandinihana natao tamin'ny taona 2018, vehivavy miisa 96 ka hatramin'ny 40 ka hatramin'ny 60 no nampiasaina ho fikarohana santionany hananganana raha mahavita manatsara soritr'aretina marefo eo amin'ny vehivavy menopausal ny menaka soja lecithin. Ny sasany dia napetraka tamin'ny fitondrana sojaitera lecithin soja sy ny sisa amin'ny plasebo.
Taorian'ny fotoam-pitsarana, dia nahitan'ny mpikaroka fa ny vehivavy izay nianatra ny lissithin soja dia nanam-pahaizana tsara kokoa noho ny fihenan'ny arterial sy ny tsindry amin'ny diastola raha oharina amin'ny vondrona plasebo. Ary koa, ny fahatsapana havizanana taloha dia nionona ny famelomana, fa tsy izany ny vondrona plasebo.
Ahoana ny fiasan'ny lecithin?
Sahala amin'ny phospholipids hafa, Ny molekiola lecithin dia mihena ao anaty rano fa menaka. Na izany aza, raha afangaro amin'ny menaka ny rano, dia ho levona ihany koa ilay molekiola. Raha ny tena izy dia mazàna no hita ao amin'ny fifangaroana misy rano sy menaka, indrindra fa ny mombamomba ny molekiola misy molekiolan'ny menaka. Amin'ireo faritra ireo, ny fatran'ny asidra matavy dia mifamatotra amin'ny menaka sy ny vondrona phosphate ao anaty rano.
Vokatr'izany, ny lecithin emulsify dia afaka mamorona ampinga miaro kely manodidina ny tavoahangy menaka, ka manelingelina ny menaka ao anaty rano. Ny vondrona fosfatse izay mahasarika ny rano dia mamela ny rano mitete solika izay, raha sendra ara-dalàna dia tsy hita ao anaty rano, hitoetra ao anaty rano mandritra ny fotoana maharitra. Manazava ny antony tsy mampiavaka ny fampakaram-boasary sy ny salady ny faritra samihafa amin'ny menaka sy rano.
Ny voka-dratsin-kena sy ny risika
Ny fanjifana lecithin soja dia mety hiteraka voka-dratsin'ny lecithin soya soja. Ny fiantraikan'ny soja lecithin mahazatra dia:
Fanaintainana amin'ny ratra
Mitombo ny salivation
Miteraka alikaola ve izany?
Raha tena mihetsika be ny vatanao ny vatanao, dia mety hamorona allergy soy ianao amin'ny fanitranana ny lecithin soy. Noho izany, tsara ny manontany amin'ny mpamatsy fitsaboana anao raha toa ka mahatsapa allergy ny soja alohan'ny hanombohanao maka ronono soja lecithin, soja lecithin sakanana sakafo hafa misy sakafo misy soja lecithin.
Noho izany, ny allie allie dia anisan'ireo fiantraikan'ny soy lecithin koa. Na izany aza, mitranga amin'ny toe-javatra tsy fahita firy.
Misy ifandraisany ve ny lecithin soya sy ny estrogen ao amin'ny vatanao?
Nisy ny ahiahy momba ny fifandraisan'ny soja lecithin sy ny haavon'ny estrogen ao amin'ny vatan'olombelona. Misy ny olona milaza fa ny fanjifàna lecithin soja dia afaka manelingelina ny famokarana mahazatra ny tiroida sy ny hormonina endocrine. Ny mampikorontana dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana isan-karazany ao anatin'izany ny olana fadimbolana.
Saingy, ny tena toerany dia tsy misy porofo siantifika mampiseho fa ny vatan'olombelona dia afaka mampiasa ny "plant estrogen" ho azy. Lecithin estrogen dia mety hisy fiantraikany amin'ny hetsika estrogenikan'ny olona iray fotsiny raha avy amin'ny loharanom-biby. Ny fanadihadiana nataon'ny Thorne Research dia manohana ity andraikitra ity. Ny valin'ny fikarohana dia mampiseho fa ny vokatra soja sy soja dia tsy miteraka olana estrogen amin'ny olona.
Noho izany, tsy misy fifandraisana eo amin'ny lecithin soya sy ny estrogen ao amin'ny vatan'olombelona.
Ahoana no handraisana ny fametrahana Soy Lecithin?
Ny soja lecithin soja dia misy amin'ny endrika maro samihafa ao anatin'izany ny sela lecithin soja, pills soja lecithin, soja lecithin, soja lecithin soja ary soja lecithin soja.
Ny marina soja lecithin fatra dia havany amin'ny olona iray mankany amin'ny olona iray. Izany dia satria miankina amin'ny lafin-javatra isan-karazany toy ny toe-pahasalamana ankapobeny sy ny taonan'ny mpanjifa.
Tsara homarihina fa tsy misy porofo ara-tsiansa ampy mampiseho ny fatra amin'ny lecithin azo antoka ho an'ny scenario manokana. Na izany aza, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny dosie dia manodidina ny 500mg ka hatramin'ny 2,000mg, nefa zava-dehibe ny manatona ny mpitsabo anao amin'ny asa fitsaboana mba hanamafisana ny fatra tsara indrindra ho anao.
Na dia tsy ilaina aza izany dia tsara ny mandray an-kanina lecithin matsiro.
Soy lecithin powder dia mampiasa
Ny vovony soja lecithin dia ampiasaina amin'ny tanjona isan-karazany ao anatin'izany:
Emulsification: Ny mpanamboatra vokatra sy ny kosmetika dia manamboatra mofomamy soja lecithin mba hampiasana vovony soja lecithin ho toy ny emulsifier na a congealing agent amin'ny fizotrany.
Kosmetika sy fitehirizana sakafo: rehefa ampidirina ao anaty vokatra ara-tsakafo toy ny sôkôla, gravies, nut de mofomamy, sakafo namboarina sy fanaovana salady na vokatra kosmetika (makeups, shampoos, conditioners hoditra, fandroana vatana na balsam-borona) ny vovony soja lecithin dia miasa toy ny fitehirizana malefaka, ny fanitarana ny fiainany .
Ny olona sasany dia mividy soja lecithin mba hampiasa ny lecithin ho toy ny fitazomana ny vokatra vita amin'ny fanamboarana trano sy sakafo.
Supplementing Choline: Betsaka ny olona mividy soja lecithin soja satria fantany fa ny soja lecithin vovobony dia loharanon'ny choline manankarena. Azonao atao ny manondraka ny sotrokely iray na roa amin'ny siramamy, ranom-boankazo, yaourt, voamadinika, oatmeal na sakafo hafa na zava-pisotro tianao ilainao isan'andro.
Ity fanampin-tsakafo ity dia manolotra tombony ho an'ny fahasalamana ho anao. Ny tombony dia misy ny voka-dratsin'ny homamiadana ambany kokoa, ny fandevonan-kanina, ny lactation tsy misy marary, ny fahasalamana ara-tsaina tsara kokoa, ny dementia soritr'aretina fanamaivanana ary ny fanatsarana ny tsy fahampiana.
Lecithin sy ny fatiantoka mavesatra
Lecithin dia miasa amin'ny mpandoro matavy sy emulsifier ao amin'ny vatan'olombelona. Ny votoatin'ny choline ao amin'ny lecithin dia manala ny tavy voangona ao amin'ny vatana, manentana ny fahombiazan'ny metabolism fahaleman'ny atiny. Raha afaka mandoro tavy sy kaloria be dia be ny vatana, noho izany dia mampihena ny lanjany.
Ankoatr'izay, ny fikarohana dia nanoro hevitra fa ny olona mandray lecithin dia mahatsapa fampisehoana sy faharetana tsara kokoa raha oharina amin'ireo tsy manao. Noho izany, miaraka amin'ny fanampian'ny lecithin, ny olona iray dia afaka miasa mafy kokoa sy mandritra ny fotoana maharitra, ka mahatonga ny fihenan'ny lanjany bebe kokoa.
Aiza no Mividy Soy Lecithin
Manontany tena aho momba ny soja lecithin hividy? Raha mitady an-tserasera ianao, dia ho hitanao fa misy loharano marobe izay azonao atao mividy bey lecithin be izay te-hamidy soy lecithin. Na izany aza, tsy maintsy manao ny zotram-po ianao amin'ny fametrahana ny fahamarinan'ny mpivarotra mba hahazoana antoka fa ny tena soja lecithin izay novidinao dia tena misy. Aza matoky ny olona milaza fa mividy soy lecithin raha tsy te hianjera amin'ny tanan'ny mpisoloky na mpivarotra sandoka ianao. Mandehana mpivarotra voamarina sy fahazoan-dàlana.
Ny fampiasana ny lecithin soya dia betsaka ary ny tombony azo avy amin'ireo loza mety hitranga sy ny voka-dratsy miaraka amin'ny fampiasana soy lecithin. Na izany aza, ny mpampiasa soy lecithin dia tokony hanaraka ny soso-kevitra fatra amin'ny fanampiny dobo mba hahazoana ny tsara indrindra avy aminy. Ankoatr'izay, isaky ny te-hividy lecithin soy izy ireo hividianana azy na ho an'ny orin'asa dia tokony hisy antoka ny olona hahazo azy io amin'ny loharano azo itokisana.
Chung, C., Sher, A., Rousset, P., Decker, EA, & McClement, DJ (2017). Fandrafetana ireo emulily sakafo amin'ny alàlan'ny emulsifiers voajanahary: fampiasa amin'ny quillaja saponin sy soja lecithin hamolavola ireo kapotsy fisotroana kafe. Journal of Engineering Engineering, 209, 1-11.
Hirose, A., Terauchi, M., Osaka, Y., Akiyoshi, M., Kato, K., & Miyasaka, N. (2018). Vokatry ny lecithin soya amin'ny reraka sy ny menopausal soritr'aretin'ny vehivavy antitra: fianarana natao tsiroaroa, avo roa heny, plasebo. Diarin'ny sakafo mahavelona, 17(1), 4.
Oke, M., Jacob, JK, & Paliyath, G. (2010). Vokatry ny lecithin soja amin'ny fampitomboana ny kalitaon'ny ranom-boankazo / saosy. Fikarohana iraisam-pirenena momba ny sakafo, 43(1), 232-240.
Yokota, D., Moraes, M., & Pinho, SCD (2012). Famantarana ny liposom lyophilized vokarina miaraka amin'ny lecithin soy tsy voadio: fandinihana tranga momba ny microencapsulation casein hydrolyzate. Gazety breziliana momba ny teknolojia simika, 29(2), 325-335.
Züge, LCB, Haminiuk, CWI, Maciel, GM, Silveira, JLM, & de Paula Scheer, A. (2013). Ny famoahana catastrophic sy ny fitondran-tena rheolojika amin'ny emulsions sakafo misy soja lecithin sy Tween 80. Gazety amin'ny injeniera amin'ny sakafo, 116(1), 72-77.